WWF: ringana tato anatin’ny 40 taona ny 60%-n’ny biby | NewsMada
WWF: ringana tato anatin’ny 40 taona ny 60%-n’ny biby
Zava-doza! Namoaka tatitra ny fikambanana iraisam-pirenena miaro ny tontolo iainana WWF sampana Frantsa, ny 30 oktobra teo. Nambarany fa teo anelanelan’ny taona 1970 sy ny 2014, izany hoe tato anatin’ny 40 taona, ringana tsy misy intsony ny 60%-n’ny biby manana taolan-damosina eto an-tany. Voakasik’izany ny biby mampinono, ny mandady sy mikisaka, ny vorona, ny trondro, sns. Nosinganiny amin’izany fa vitsy kely sisa ny elefanta, ny gidro “orangs-outans”, ny vorondrano tsy misy elatra (manchots), sns, aty Afrika.
Avo 1.000 heny
Tsy nampoizin’ny manam-pahaizana sy ny mpandinika mihitsy ity zava-mitranga ity. Voalaza fa avo 100 na 1.000 heny miohatra amin’ny tombana sy ny fanadihadiana natao tany aloha izao faharinganana izao. Mazava ny tatitry ny WWF, nahatonga ireo biby ireo ho ringana, ny asa ataon’ny olombelona, manapotika ny tontolo iainana, toera-ponenan’ny biby sy ny hazandrano.
Elefanta telo maty isan’ora
Anisan’ny manafaingana ny faharinganana ny fihazana ny biby sy ny hazandrano, ny varotra tsy ara-dalàna. Singanina amin’izany, elefanta telo isan’ora no maty, lalomena (rhinoceros) telo isan’andro, tigra roa isan-kerinandro, sns.
Eo koa ny fiakaran’ny maripana, +2,8°C, any amin’ny tapany andrefan’ny Antarctique, toerana mangatsiaka sy misy ranomandry, nanomboka ny tapany faharoan’ny taonjato faha-20. Potika ny toeram-ponenan’ny hazandrano “manchots”, tsy nisy intsony ny sakafo fihinany toy ny patsakely “krill”.
Anisan’ny tena tandindonin-doza eto Madagasikara koa, ny varika na ankomba, ny sokatra, ny fosa, biby tsy fahita raha tsy eto amintsika.